NIDA | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
မုန်တိုင်း NIDA လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့လျော့ကျ
December 3, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့လျော့ကျသွားပြီဖြစ်သော မုန်တိုင်း NIDA သည် ယနေ့နံနက် 0300 GMT check time တွင် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပြီး ယမန်နေ့က ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ပိုမိုအေးမြပြီး ခြောက်သွေ့သော လေထု အခြေအနေကြောင့် လာမည့် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း လုံးဝ အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း JTWC data များအရ သိရပါသည်။ NIDA နှင့် ပတ်သက်၍ JTWC ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း
ဂူအမ်ကျွန်း အနောက်ဘက် ၁၁ဝ နော်တီကယ်မိုင် (၁၂၇ မိုင်ခန့်) တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မည့် အလားအလာကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း ဂူအမ်ကျွန်း၏ မိုးလေဝသ ရေဒါတွင် တွေ့မြင်နေရကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ mmweather မှ ရရှိမည့် သတင်းများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, tropical-depression, weather. LeaveaComment »